Liverpool oo Go’aan ka Gaartay Hadii Coutinho uu Helayo Bilada Champions League - Wargane News
Home Sports Liverpool oo Go’aan ka Gaartay Hadii Coutinho uu Helayo Bilada Champions League
Liverpool ayaa go’aansatay inay siiyaan Philippe Coutinho bilada Champions league oo ay finaalka la cayaari doonaan Real Madrid.
Laacibka reer Brazilian ayaa kamid ahaa 25 cayaariyahan ee kooxad Reds u cayaartay tartanka xagaagn, sida ay warineyso Liverpool Echo.
Yeelkeede , wuu ka dhaqaaqay kooxda Anfield bishii January isagoo ugu biiray lacag dhan £142 milyan oo gini kooxda Barcelona kadib ogolaansho ka yimid macalinka kooxda bil kahor.
Inkastoo uu horaantii xagaaga u cayaaray Reds tartanka Chmapions League, isagu ma awoodi Karin inuu u cayaaro kooxda Barca kulamadii bug baxda.
Sharciga UEFA ayaa sheegaya in kooxda ku guuleysta Champions League ay heli doonto 40 biladood halka kooxda laakinta labaad lasiin doono 30 bilad oo qalin ah kadib finaalka ay gareen. Waxaana biladahaas lasiin doona cid walba oo kooxda kamid ah.
Kubbad qaabeyihii hore ee Inter Milan ayaa dhaliyay shan gool shan kulan uu u saftay Champions League kooxda Reds, waxaana kamida seddaxley uu ka dhaliyay kulankii Spartak Moscow markaa uu xirnaa calaamada kabtan ee naadiga kulankii ku dambeyay ee group oo ka dhacay Anfield bishii December.
Jurgen Klopp ayaa mar walba ku adkeysanayay inuusan Coutinho u dhaqaaqin Barcelona waloow bilada loo diri doono gobolka Catalonia.